News - महराले चिनियाँसँग प्रतिसभसद् एक करोड रुपैयाँ मागे
Saturday, 09.04.2010, 11:40am (GMT+6.5) | Comment | Print | Tell friend
काठमाडौँ, भदौँ १८, प्रधानमन्त्री चुनावका लागि एकीकृत माओबादीका तर्फाट कृष्णबहादुर महराले चिनियाँसँग ५० करोड मागेको भनी केही टेलिभिजन च्यानलले दुर्इ पक्षबीच भएको टेलिफोन रेकर्ड प्रसारण गरेका छन् । महराले चिनियाँसँग प्रतिसभसद् एक करोड रुपैयाँको दरले उक्त रकम मागेको टेलिभिजन च्यानलहरुले रकेड शुक्रबार सार्वजानिक गरेका थिए । महरा र चिनियाँबीच भनिएको कुरा कानीबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सकेको छैन । महराको जस्तै स्वरबाट चिनियाँ लवजका व्यक्तिसँग कुराकानि भएको प्रसारित रेकर्डमा सुनिन्छ । दुवै वार्ताकारको अंग्रेजी भाषामा भने कमजोर छ । यो वार्ता कहिले भयो र कोसँग भयो भन्ने रेकर्डमा खुल्दैन । माओवादीले यसको खण्डन गरेको छ ।
महरालेभन्नु भएको छ ' नेपाल १ को प्रस्तुतिले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । मेरो नाम जोडेर सुनाएको चिनियाँ अधिकारीसँगको कुराकनी तथाकथित छ, कृत्रिम छ । यो अडियो टेप बिकुलै निराधारपुर्ण, भ्रामक र कपोकल्पित भएको स्पष्ट गर्छु उक्त समाचार मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने र वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि पार्टीले गरिरहेको सकारात्मक प्रयासलाई ध्वंस्त गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रका रुपमा आएको एउटा झुटको खेती हो ।'
वार्ताको केही अंश
चिनिया : महराजी, नेपालको अवस्था के छ ? अर्को चुनाव आउँदैछ, जित्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
महरा : धेरै नजिक छौँ तर स्पष्ट भने छैन ।
चिनियाँ : के माओवादीले बहुमत ल्याउछ त ?
महरा : सम्भावना कम छ । प्रयास गरिरहेका छौँ, तर धेरै गाह्रो छ ।
चिनियाँ : पर्याप्त मत नआउनुको कारण चाँही के हो ?
महरा : हामीसँग १०, १५ सभासद् पहिल्यै छन्, अझै ५० चाहिएको छ ।
चिनियाँ : थप ५० चाहिएको हो - महराजी त्यसका लागि कोस्तो सहयोग चाहिन्छ ?
महरा : यो धेरै गाह्रो कुरा हो । तिनलाई रोक्न आवश्यक छ । पहिला त दक्षिणलाई तटस्थ गराउनु आवश्यक छ । अर्को कुरा केही पैसा पनि चाहिएको छ ।
चिनियाँ : तपाईलाई आवश्यक पैसा कति हो ?
महरा : यो स्पष्ट छैन, यो बारे अध्यक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
चिनियाँ : महराजी, मेरो एक जना साथी तपाईलाई सहयोग गर्ने सोचेकोछ, तर ऊ नेपाल आउन सक्दैन । त्यसैले, हामी अन्त कुनै ठाउँमा भेट्न सक्छौं कि ?
महरा : उसलाई कहाँ भेट्न सजिलो पर्ला ?
चिनियाँ : तपाईलाई हङकङ सजिलो पर्छ ?
महरा : ऊ कोसँग भेट्न चाहन्छ ?
चिनियाँ : कि तपाई, कि तपाईको अध्यक्षसँग ।
महरा : अध्यक्षलाई यताउता गर्न अप्ठरयोरो पर्छ । उहाँ हङकङ जानुभयो भने सबैले हल्ला मच्चाउनेछन् । उहाँ प्रधानमन्त्रि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनु हुन्छ ।
चिनियाँ : त्यसो भए तपाई उहाँको प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ ।
महरा : म तयार छु । जहाँ पनि जान सक्छु तर यो सन्देश अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुर्याउनपर्छ । यदि तपाईले प्रचण्डलाई सन्देश पठाउनुभयो भने उहाँले सम्पूर्ण् अधिकार मलाई दिन सक्नुहुन्छ ।
चिनियाँ : ठिक छ । हामी माओवादीलाई ५० सिट दिलाउन कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सबभन्दा पहिला तपाईलाई भेट्ने सोच्दैछौं ।
महरा : सबभन्दा राम्रो ठाउँ चीन हुन्छ वा छेन्दु । यो ठाउँमा भेटे कसैले थहा पाउदैनन् ।
चिनियाँ : यो एकदमै सम्वेदनशील विषय हो । हामी सरकारलाई यसमा जोड्न चाहँदैनौ । तपाईले बुझ्नुभयो होला नि, म के भन्दैछु ।
महरा : त्यसो भए सिङ्गापुर - हङकङमा धेरै नेपाली छन् । सिङगापुर नै ठिक हुन्छ ।
चिनियाँ : .......मलाई साथीसँग सल्लाह गर्न दिनुस् ।
महरा : हङकङ पनि हुन सक्छ....... साँझ म तपाईलाई फोन गर्छु ।
चिनियाँ : तपाई मलाई हङकङ हुन्छ कि हुँदैन भने दुई दिन भित्र बताउन सक्नु हुन्छ ?
महरा : फोनमा ?
चिनियाँ : अँ, यही नम्बरमा ।
महरा : तपाईले आफ्नो स्रोतबाट अध्यक्षलाई जानकारी दिनुहोला ।
चिनियाँ : मतलब हामी तपाईको अध्यक्षसँग कुरा गरौं भन्ने चहानुहुन्छ -
महरा : हुन्छ, म फोन गर्छु ।
महरा : तपाईको सल्लाह अनुसार मैले अध्यक्षसँग छलफल गरेँ । अरु कसैले पनि अध्यक्षसँग कुराकानी गरिरहेको छ ?
चिनियाँ : मलाई थहा छैन । मेरो तर्फबाट अहिलेसम्म यो कुरा म, मेरो साथी र तपाईलाई मात्र थाहाछ ।
महरा : मैले अध्यक्षसँग गफ गरिसकेँ । उहाँले भन्नुभयो, चुनाव आउन चार दिनमात्र बाँकी रहेकोले बाहिरबाट कम्तिमा ५० जना सभासद् चाहिएको छ । त्यसका लागि हामीलाई प्रतिव्यक्ति कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।
चिनियाँ : प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ ?
महरा : अँ ।
चिनियाँ : ए ठिक छ । मैले भनेको साथी, म उसको नाम यहाँ फोनमा भन्दिनँ, उसैको सुरक्षाका लागि महराजी, तपाई केही मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । ऊ पहिला तपाईसँग गफ गर्न चाहान्छ, किनकी ऊ पहिला विस्तृत कुरा गर्न चहान्छ तपाई हङकङ भ्रमण गर्न चहानुहुन्छ भने ।
महरा : हुन्छ तर हङकङमा धेरै नेपालीहरु छन् ।
चिनियाँ : अरु देशका लागि उनलाई विशेष भिसा चाहिन्छ । यसले सबै चनाखो हुन्छन् तर हङकङमा उनी सजिलै जान सक्छन् । कसैले थाहा पाउँदैनन् ।
महरा : कहिले
चिनियाँ : हामी जुनसुकै बेला तयार छौँ । तपाईका लागि कुन बेला उपयुक्त हुन्छ ?
महरा : तर चुनाव हुन चार दिनमात्र बाँकी छ, हामीलाई त्यसअघि नै चाहिएको छ, तर म आज वा भोलि आउने प्रयास गर्छु ।
चिनियाँ : तपाई हङकङमा कति समय बस्नुहन्छ ? एक रात ?
महरा : एक रात काफी हुन्छ ।
चिनियाँ : ठिक छ , हामी जुनसुकै समयमा जान सक्छौं । त्यो तपाईमा भर पर्छ ।
महरा : त्यसो भए म दिउँसो १० देखि १२ बजे भित्र फोन गर्छु म यही साँझ जान सक्छु । म अर्कै नामले कल गर्छु इमेल १० मिनेट पछि हर्नुहोस।
चिनियाँ : हुन्छ म अहिले एउटा बैंकमा गइरहेको छु । म नेपाली समयअनुसार बिहान १० बजे इमेल चेक गरीसक्छु । महराजी, यदि तपाई हङकङ जानु भयो भने तपाईलाई कहाँ लिन आउँ भन्नु होला ।
महरा : हुन्छ ।